"Wathungela" manicure - omunye ezintsha ezithakazelisayo kunazo nail-art, okwadingeka ukuba bawine udumo ezithile phakathi ozinikezele wendawo. amakhosi banamuhla bazi embodiments eziningi. Ngenxa yokushintsha gqwa lwamaphethini inganikelwa izandla zikanokusho uzilungise ukubukeka. Ngemva kokufunda isihloko lanamuhla, wenza kanjalo uyokuqonda kanjani ukwenza "wathungela" manicure.
Phakathi ukukhishwa nail ukuze nail isicelo iphethini ngomala ukuthi okungase kuthintwe, kokuba kwalo ngesandla. Ungasebenzisa evamile hhayi kuphela, kodwa futhi gel-elingenamikhono. Futhi esimweni sesibili kungenzeka kuzuzwe umphumela ngokuwina. Yiqiniso, ungasebenzisa nail evamile. Kodwa ke Ukusabalala bayoba nesimo elula, ngaphandle umphumela ozungezayo.
ezinhle Ikakhulukazi ubukeka lokhu design ku izipikili short naphakathi. Ukuze iphethini kwadingeka okukhulu kwemvelo, wenziwa ngombala owodwa, kancane ufafaze powder acrylic noma velvet isihlabathi. Ngokuvamile ku elimhlophe, ilambu elikuhlaza, pink okhanyayo noma isizinda beige ibekwe izakhi okuhlobisa ezifana sequins noma rhinestones.
Labo abazama ukuthola indlela yokwenza "wathungela" manicure, kuyoba mnandi ukuthola ukuthi zikhona izindlela eziningana ukuze afeze namuhla. Ethandwa kakhulu kubhekwa ubuchwepheshe zakudala, lokusho izindaba zonke izinzipho i ukuvenisha efanayo. Lokhu ugwema kokuqhathanisa abukhali futhi agcizelele ubuhle yesithombe.
Ngaphezu kwalokho, lapho kuthiwa okuthiwa intsha su, okusikisela ukuthi eziningana ezifanayo nail iphethini sisetshenziswa. Kwezinye izimo, inkosi enquma uhlaka nemigwalo usebenzisa upende ka ezihlukile.
Ayikho ngaphansi ziphoqa phakathi ozinikezele yasekhaya indlela kuhilela ukusebenzisa amaphetheni multi-umbala. Lesisigaba ingathiwa inqubo ehlukile Ombre.
Izinzuzo esemqoka yalo mklamo
Labo abafisa ukuba baqonde indlela ukwenza "wathungela" manicure, ngokuqinisekile kuzokuhambela ezithakazelisayo ukuzwa izinzuzo zalesi art nail. Izinzuzo main yaleli su ingathiwa ukuthi ngokulinganayo ngempumelelo ibukeka futhi izinzipho lamafisha. Kwafaneleka iphethini oblong zibukeke ukudonsa ipuleti, enikeza izandla ukubukeka yobuhle ngaphezulu. Ikakhulukazi isiteleka izinzipho iDemo bheka emapheshana, amaketanga kanye pigtails.
Ngaphezu kwalokho, "wathungela" manicure lokho akusho ukuthi kudingeka yonke iminwe. Abakwazi ahlotshiswe nomunye nail esandleni ngasinye. ukubukeka Abaningana impela umxhwele futhi imfashini manicure usebenzisa izinhlobo eziningi umhlobiso. Ngokwesibonelo, omunye umunwe ungakwazi ukuhlobisa "wathungela" amaphethini ngomala, omunye kutsetselelwe isiliva noma igolide sequins.
Indlela yokwenza "wathungela" ijeli manicure sula?
Kufanele kuqashelwe ukuthi imishini eyisisekelo, okuzoxoxwa ngezansi, ngakho elula ukuthi ngisho esontweni ungakwazi ukubhekana naso kalula. Okokuqala udinga ukuqala ukulungiselela izinzipho. Njengoba ziyasuswa cuticle, gaya, adlulisele ukuma emihle futhi degreased. Ngemva kwalokho, ipuleti camera nge primer i-asidi i-adhesion ngcono izingqimba okwalandela.
Ingabe zizosetshenziswa base nail yomiswa ngaphansi ngesibani ultraviolet. In the isinyathelo esilandelayo plate kuthiwa namabala ukuba umbala oyifunayo bese uqalisa iphethini aluka. Labo abafuna ukuqonda ukuthi ukwenza "wathungela" ijeli manicure ukuvenisha kungenziwa Kunconywa ukusebenzisa ibhulashi esihle le njongo. Kulula kakhulu ukuba sifake iphethini oyifunayo.
Kanye nail ukuchitha emgceni locondzile, it is omisiwe ngaphansi isibani UV bese uphinda zokukhwabanisa futhi. Kuyadingeka ukuthola umthamo. Ngemva kwalokho, ngesikhathi ummango okuncane kuya postpaid kubangele imivimbo Imfushane kangangokuba iphethini efana iphethini herringbone. Ngaphezu kwalokho, ngamunye ukuvenisha ungqimba womile nge ultraviolet. Ngakolunye uhlangothi dot line. nail phezulu ikhava phezulu, womile ngaphansi isibani isuswe kanye ungqimba ingcina.
Indlela yokwenza "wathungela" ezivamile lacquer manicure?
Lokhu ubuchwepheshe silula, futhi ngenxa yalokho uyawuthanda Ukuthandwa kwezindlela phakathi kwabesifazane zanamuhla, ubani owaphucwa unakekele ukubukeka kwabo. Kuyinto enhle ngoba ayidingi ukuba abanye amakghono anqophileko. Ukuqalisa umqondo onjalo bengayi kuphela gumbi, kodwa futhi ekhaya. Ngaphambi kokwenza "wathungela" manicure, bheka, ingabe konke okudingayo asesandleni sakho. Ukudala nomhlobiso ngomala uzodinga ukuze bathuthukise ulimi futhi velvet isihlabathi. Kungcono ukusebenzisa imibala eziningana ngokuvumelana. Ngenxa lo mphumela ngokucace nakakhulu bungatholakala.
Ngaphambi kokuba "wathungela" manicure ezivamile ikhava lacquer ipuleti phezulu. Lokhu kuzokwenza izingqimba okwalandela iyunifomu ngaphezulu. Khona-ke izinzipho zipendwe by odweba anemibala ehlukene kanye usuphinda uma kunesidingo. Ngemva kwalokho, ebusweni ipuleti ukudweba iphethini oyifunayo. Ukwenza kuwusizo kakhudlwana usebenzisa ibhulashi esihle. Hhayi kwadingeka isikhathi ukuze ome enamathela bafafazwe isihlabathi velvet. Ukuze hhayi abaphazamisa umphumela esithambile of okuhlanganisa ku izinzipho akufanele sekugcineni isicelo. Vele ukulinda omiswe ephelele izingqimba.
Thola indlela ukwenza "wathungela" manicure ekhaya, ingasaphathwa into ebaluleke kakhudlwana. Ukwazi lezi ubuqili kuzovumela yalokho esithé ukuphakama.
Lokho iphethini akusho ukusakaza phezu plate, kudingeka kahle isisekelo ezomile wena. Ukuze kube lula okukhiwa nomhlobiso kuyinto efiselekayo sisebenzise paintbrush mncane kakhulu. Ukuze uthole iphethini ngakuthathu, kumele sikwenze izingqimba okungenani emibili noma emithathu. Okuwukuphela kwendlela uzoba get a manicure textured "wathungela".
Iphethini (indlela yokwenza, ungabona ngenhla nje) ngokuzikhethela ehlotshiswe rhinestones, sequins nezinye izakhi okuhlobisa. Musa ukusebenzisa umhlobiso ozungelezayo ku acrylic izinzipho. Ukuze uthole surface bushelelezi kuyinto efiselekayo ukusebenzisa matte fixer. Lapho usebenza nge acrylic powder noma velvet lasogwadule akusebenzi topcoat.
Indlela lwaleli nail?
Indawo yokudlela "Momo": ukubuyekezwa, ikheli, imenyu
I ngokucacile yolwazi zefilosofi